प्रियंका चोपडाले समुद्रको बीचमा श्रीमान निक सँग नयाँ वर्ष मनाइन्, सेयर गरिन् यस्ता हट र रोमान्टिक (तस्विरसहित) – 24updatemedia
प्रियंका चोपडाले समुद्रको बीचमा श्रीमान निक सँग नयाँ वर्ष मनाइन्, सेयर गरिन् यस्ता हट र रोमान्टिक (तस्विरसहित)
प्रियंका चोपडा सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय रहन्छिन् । उनी प्रायः आफ्ना तस्विर फ्यानसँग शेयर गर्छिन् । प्रियंका चोपडाले दुई दिनपछि नयाँ वर्ष मनाउने तस्विरहरु सेयर गरेकी छिन् । प्रियंका चोपडाले पति निक जोनससँग नयाँ वर्ष मनाएकी छिन् ।
यी तस्विरहरूमा उनी पति निक जोनससँग समुद्र तटमा रोमान्टिक शैलीमा रमाइलो गरिरहेको देखिएकी छिन् । नयाँ वर्षको छुट्टीमा पनि प्रियंका चोपडाको ग्ल्यामरस र हट लुकमा देखिएकी छिन् । बिच सीमा प्रियंका चोपडा र निक जोनस निकै रोमान्टिक स्टाइलमा देखिए । दुवै पूर्ण छुट्टीको मोडमा देखिएका थिए। उनले यी तस्विरहरू इन्स्टाग्राममा सेयर गरेकी हुन् । प्रियंका चोपडाले सन् २०२२ लाई पति निक जोनससँग निकै सुन्दरताका साथ स्वागत गरिन् ।
उनले सामाजिक सञ्जालमा धेरै तस्विर शेयर गरेकी छिन्, जसमा उनले निक जोनससँग रोमान्टिक शैलीमा नयाँ वर्षलाई स्वागत गरेको स्पष्ट देखिन्छ । यी तस्विरहरूमा प्रियंका चोपडा समुद्रको बीचमा एउटा डुङ्गामा देखिएकी छिन् ।
Previous ठट्टा होइन साँच्चिकै! आइफोन किन्नकै लागि मृगौला बेचेका युवा मृ’त्युसँग लड्दै….
Next भाग्यमा छ भने भगवानले २० करोडले हान्छन्, टिनको छानो फु’टाएर घरभित्र आउँछ धन